Parlemantera manohana ny fitondrana : Tsy maintsy ho ao anatin’ ny governemanta
Taorian’ ny firodorodoan’ ireo mpanohitra fitondrana nihaona tamin’ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, dia niandry tantana ary nifampidinika tamin’i Ntsay Christian ihany koa ny avy amin’ ny parlemantera miisa 79 manohana ny fitondrana. Nivoitra kosa nandritra …Tohiny
Baomba teny amin’ny Jumbo Smart Tanjombato : Mbola mampihorohoro amin’ny finday ireo jiolahy
Mbola nitohy hatramin’ny omaly ny fandrahonana tamin’ny alalan’ny sms sy antso an-telefaonina nataon’ireo olon-dratsy nametraka baomba vita tanana teny amin’ny trano fivoahan’ny lehilahy eny amin’ny Jumbo Smart Tanjombato, ny alakamisy hariva lasa teo. Ny tompon’andraikitra …Tohiny
Ady seza eo amin’ireo mpitokona : Mikatso ny fandrafetana ny governemanta
Misedra fahasahiranana ny praiminisitra Ntsay Christian eo amin’ny fananganana ny governemanta vaovao noho ny afitsok’ireo mpitolona etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Nivadika tamin’ireo sendika nataony fitaovana nanamaro sy nanamaro isa azy teny an-kianja mantsy ireto …Tohiny
Fanafihan-dahalo tany Tsaratanàna : Olona telo namoy ny ainy, trano 78 kila forehitra
Nisehoana fanafihan-dahalo indray tany Amboasary, fokontany Ambodiavoara, kaominina Sakoamadinika, distrikan’i Tsaratanàna ny 05 jona lasa teo, tokony ho tamin’ny 01 ora maraina. Vokany omby miisa 30 tao amina fianakaviana iray no very lasan’ireo malaso miisa …Tohiny
Raharaha 7 Febroary – Ravalomanana Marc : Nohamafisin’ny Fitsarana ny fampiharana didim-pitsarana